Rio Ferdinand oo sheegay in Xushmad daro loola Dhaqmay Lionel Messi Markii Dhulka la Seexiyay Xalay | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Rio Ferdinand oo sheegay in Xushmad daro loola Dhaqmay Lionel Messi Markii...
Rio Ferdinand oo sheegay in Xushmad daro loola Dhaqmay Lionel Messi Markii Dhulka la Seexiyay Xalay
Lionel Messi ayaa ku riyaaqay habeenkiisii ​​ugu fiicnaa isagoo ciyaaryahan Paris Saint-Germain ah kulankii ay xalay la ciyaareen Manchester City ee Champions League.
Halyeeygaan ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda PSG kadib markii uu kooxda ku soo biiray bishii hore.
Messi ayaa kubbada ka helay meel u dhow xariiqda bartamaha wuxuuna u dhaqaaqay dhanka goolka ka hor inta uusan kubad gees kore oo shabaqa ah dhex dhigin.
Goolka Messi ayaa ka caawiyay PSG inay 2-0 ku garaacdo kooxda Pep Guardiola. Idrissa Gueye ayaa hogaanka u dhiibay kooxda martida loogu ahaa Parc des Princes daqiiqadii sideedaad.
Dhamaadkii ciyaarta, Messi ayaa loo dhiibay shaqo lama filaan ah isagoo seexday dhulka kana danbeeyay darbigii PSG ee difaacanayay laad xor ah oo Manchester City loo dhigay, sida aad ka arki karto sawirka kore.
Muuqaalka Messi – oo la dhihi karo waa ciyaartoygii ugu weynaa taariikhda – oo derbiga gadaashiisa jiifa ayaa dareen badan ka dhaliyay baraha bulshada.
Si kastaba ha ahaatee, daaficii hore ee Manchester United Rio Ferdinand ayaa rumeysan in Messi uu ka qiimo weyn yahay in laga dhigo shaqsiga jiifta darbiga gadaashiisa.
“Markii uu Pochettino weydiisanayay Messi inuu sidaas ku sameeyo garoonka tababarka, waxay aheyd inuu qof ku yiraahdo ‘maya, maya, maya’. Leo Messi waxaas ma sameeyo. Waa ixtiraamdarro, ma ogolaadeen aniga in sidaas Messi lagu sameeyo” ayuu yiri Ferdinand.
“Haddii aan kooxdaas ka tirsanaan lahaa, waxaan dhihi lahaa: dhageyso, aniga ayaa dhulka kuu jiifanaya.’ Waan ka xumahay, ma ogolaadeen in sidaas dhulka loo jiifiyo. Uma qalmo in maaliyadiisa la wasaqeeyo. Ma ahan wax Messi looga bartay inuu sameeyo.”
Previous articleWararkii ugu dambeeyey doorashada Aqalka Sare ee Somaliland
Next articleSirdoonka Suudaan oo shan askari looga dilay dagaal